Madaxweynaha Burundi: Khatarta Alshabaab ayaan dagaal kula jiraa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha dalka Burundi, Pierre Nkurunziza ayaa maanta oo axad ah markii ugu horreysay kasoo hor muuqday wariyaasha, isagoo shir jaraa’id ku qabtay xarrunta madaxtooyada ee magaalada caasimadda ah ee Bujumbura.
Madaxweyne Pierre Nkurunziza oo 13-kii bishaan saraakiil ciidan isku dayeen iney afgembiyaan, balse ka adkaaday ayaa markii ugu horreysay ilaa xilligaas uu usoo muuqday dadka iyo warbaahinta.
Hadalkii ugu horreeyey ayuu ku sheegay inuu la dagaallamayo hanjabaad ka imaaneysa xarakada Alshabaab ee dalka Soomaaliya, sida ay qoraty wakaaladda wararka AP.
“Waxaan qaadnay tallaabooyin looga hortagayo Alshabaab, waxaana si dhab ah u qaadanay digniinta” ayuu yiri Pierre Nikuruziza oo u muuqday inu shacabkiisa kusii jeedanayey Alshabaab.
Alshabaab ayaa horay u sheegtay weerraro ka dhacay dalalka Kenya, Uganda iyo Jabuuti oo sida Burundi ciidamo la dagaallama ururkaas ka joogaan Soomaaliya.
Madaxweyne Pierre Nkurunziza ayaa ka sheekeeyey xaalada dalka, wuxuuna sheegay inuu ka xunyahay dadkii wax ku gaareen rabshadihii iyo dagaalkii ka dhacay caasimadda.
Wuxuu dadka reer Burundi ugu baaqay iney ka fogaadaan rabshadaha, kana shaqeeyaan in dalkoodu wanaagsanaado sida uu yiri.
Arbacadii lasoo dhaafay, iyadoo Madaxweyne Pierre Nkurunziza uu ku maqnaa dalka Tanzania ayaa waxaa gadaashiisa sarkaal lagu magacaabo, Maj Gen Godefroid Niyombareh uga dhawaaqay inuu talada ka tuuray.
Isku-daygaas afgembi ayaa fashilmay kadib markii dagaal dhexmaray ciidamada afgembiga sameeyey ee uu hogaaminayey Maj Gen Godefroid Niyombareh iyo ciidamada daacadda u ahaa maaxweyne, Pierre Nkurunziza.
Dad reer Burundi ayaa ka carrooday kadib markii madaxweyne Pierre Nkurunziza uu sheegay inuu mar 3-aad u taagan yahay doorashada madaxweynaha iyadoo dastuurka dalkaas qorayo inuu labo mar kale isi soo taagi karo.
Pierre Nkurunziza ayaa ku dooday in doorashadii hore aheyd mid ay doorteen baarlamaanka oo uusan shacabku dooran, sidaas darteed uu xaq u leeyahay in labo mar shacab ku doortaan.